Nhau - Maitiro Ekuzvidzivirira Iwe Nevamwe
Ziva kuti inopararira sei
1. COVID-19 inopararira zviri nyore kubva kumunhu kuenda kumunhu, kunyanya nenzira dzinotevera:
2. Pakati pevanhu vane hukama hwepedyo (pakati pemamita matanhatu).
3. Kubudikidza nemadonhwe ekufema anogadzirwa kana munhu ane hutachiona akosora, achihotsira, kufema, kuimba kana kutaura.
4. Madonhwe ekufema anokonzeresa kutapukirwa kana afemetwa kana kuisirwa pane mucous membranes, senge iwo anomira mukati memhino nemuromo.
5. Vanhu vane hutachiwana asi vasina zviratidzo vanokwanisawo kutapurira hutachiona kune vamwe.
Dzisina kujairika nzira COVID-19 inogona kupararira
1. Pasi pemamwe mamiriro ezvinhu (semuenzaniso, kana vanhu vari munzvimbo dzakakomberedzwa nemhepo isina mweya yakanaka), COVID-19 dzimwe nguva inogona kuparadzirwa nekutapurirana nemhepo.
2. COVID-19 inopararira zvishoma kuburikidza nekubata neakasviba nzvimbo.
Wese Munhu Anofanirwa
maoko geza mwenje icon
Shamba maoko ako kazhinji
1. Geza maoko ako kazhinji nesipo nemvura kwemasekondi makumi maviri kunyanya mushure mekunge wave munzvimbo yeruzhinji, kana mushure mekufemera mhino, kukosora, kana kuhotsira.
2. Zvinonyanya kukosha kugeza:
3. Usati wadya kana kugadzira chikafu
4. Usati wabata kumeso kwako
5. Mushure mekushandisa chimbuzi
6. Mushure mekubva panzvimbo yeruzhinji
7. Mushure mekufemera mhino, kukosora, kana kuhotsira
8. Mushure mekubata mask yako
9. Mushure mekuchinja manapukeni
10. Mushure mekuchengeta munhu anorwara
11. Mushure mekubata mhuka kana zvipfuyo
12. Kana sipo nemvura zvisingawanikwi nyore nyore, shandisa chigunwe chekuchenesa maoko chine doro rinosvika makumi matanhatu kubva muzana. Vhara nzvimbo dzese dzemaoko ako uye uzvikweshe pamwechete kusvikira vanzwa kuoma.
13. Dzivisa kubata maziso ako, mhuno, uye muromo nemaoko asina kugezwa.
vanhu miseve yakajeka icon
1. Mukati memba mako: Dzivisa kushamwaridzana nevanhu vanorwara.
2. Kana zvichibvira, chengetedza tsoka nhanhatu pakati pemunhu anorwara uye nedzimwe nhengo dzemhuri.
3. Kunze kwemusha wako: Isa tsoka nhanhatu dzedaro pakati pako nevanhu vasingagare mumba mako.
4. Rangarira kuti vamwe vanhu vasina zviratidzo vanogona kuparadzira hutachiona.
5. Gara dzinosvika tsoka nhanhatu (dzinosvika hurefu hwemaoko maviri) kubva kune vamwe vanhu.
6. Kuchengeta chinhambwe kubva kune vamwe kwakanyanya kukosha kune vanhu vari panjodzi huru yekurwara zvakanyanya.
musoro wedivi mask light icon
Vhara muromo wako nemhino ne mask paunenge uchitenderedza vamwe
1. Masiki anobatsira kudzivirira kubva pakuwana kana kuparadzira hutachiona.
2. Unogona kuparadzira COVID-19 kune vamwe kunyangwe usinga zive kurwara.
3. Wese munhu anofanirwa kupfeka chifukidziro munzvimbo dzeveruzhinji uye kana ari pedyo nevanhu vasingagare mumba mako, kunyanya kana dzimwe nzira dzekuparadzanisa nharaunda dzakawoma kuchengetedza.
4. Masiki haafanire kuiswa pavana vadiki vari pasi pemakore maviri, chero munhu anonetseka kufema, kana asina chaanoziva, akagomara kana neimwe nzira asingakwanise kubvisa chifukidzo pasina rubatsiro.
5. Usashandise chifukidzo chakaitirwa mushandi wezvehutano. Parizvino, masiki ekuvhiya uye kufema kweN95 zvinhu zvakakosha izvo zvinofanirwa kuchengeterwa vashandi vezvehutano uye nevamwe vekutanga kupindura.
6. Ramba uchichengeta tsoka dzinosvika nhanhatu pakati pako nevamwe. Iyo mask haina kutsiva kufambidzana kwevanhu.
bhokisi tishu tishu icon
Kavha yekukosora uye kuhotsira
1. Gara wakavhara muromo nemhino netissue kana uchikosora kana kuhotsira kana kushandisa mukati megokora uye usasvipa.
2. Kanda zvinyama zvakashandiswa mumarara.
3. Pakarepo geza maoko ako nesipo nemvura kwemaminitsi makumi maviri. Kana sipo nemvura zvisingawanikwi nyore nyore, suka maoko ako nechishambadziro chemaoko chine chinosvika makumi matanhatu muzana doro.
Yakachena uye isa mushonga
1. Chenesa UYE ita mishonga inouraya nzvimbo inogara ichibatwa zuva nezuva. Izvi zvinosanganisira matafura, zvigubhu zvegedhi, switch dzemwenje, zvigaro zvekubata, bata, madhesiki, nhare, makhibhodi, zvimbuzi, mapombi, uye masinki.
2. Kana nzvimbo dzakasviba dzichenese. Shandisa sipo kana sipo nemvura usati waisa utachiona.
3. Wobva washandisa mushonga unouraya utachiona mumba. Kazhinji yakajairika EPA-yakanyoreswa imba disinfectantsexternal icon inoshanda.
musoro wedivi kwechiremba mwenje icon
Wongorora Hutano Hwako Zuva Nezuva
1. Ngwarira zviratidzo. Tarisa kupisa, kukosora, kufema kwekufema, kana zvimwe zviratidzo zve COVID-19.
2. Kunyanya kukosha kana iwe uchimhanyisa akakosha meseji, kuenda muhofisi kana kunzvimbo yebasa, uye mune zvigadziriso uko kungave kunonetsa kuchengeta panyama daro remamita matanhatu.
3. Tora tembiricha yako kana zviratidzo zvikamuka.
4. Usatora tembiricha yako mukati memaminetsi makumi matatu ekurovedza muviri kana mushure mekunwa mishonga inogona kudzikisa tembiricha yako, seacetaminophen.
5. Tevera nhungamiro yeCDC kana zviratidzo zvichikura.
Dzivirira Hutano Hwako Mwaka Uno weFuru
Zvichida kuti hutachiona hwehutachiona uye hutachiona hunokonzera COVID-19 zvese zvinoparadzira uku kudonha uye nguva yechando. Masisitimu ezvehutano anogona kukundikana kurapa vese varwere vane furu uye varwere vane COVID-19. Izvi zvinoreva kuwana mushonga wefuru mu2020-2021 wakakosha kupfuura nakare.Kunyangwe kuwana mushonga wefuru kusingazodziviriri ku COVID-19 kune zvakawanda zvakakosha mabhenefiti, akadai se:
Mishonga yekudzivirira furu yakaratidzirwa kudzikisa njodzi yekurwara nefuruu, kurapwa muchipatara uye kufa.
Kuwana mushonga wekudzivirira furu kunogona zvakare kuchengetedza zviwanikwa zvekuchengeta varwere vane COVID-19.